LiPo mabhatiri: zvakavanzika zveaya lithiamu mabhatiri | Mahara emahara
LiPo mabhatiri: zvakavanzika zveaya lithiamu mabhatiri
Kune akawanda mabhatiri sezvawakatodzidza nechinyorwa nezve bhatiri CR2032. Iwe unofanirwawo kunge uchitoziva kuti kune ma module eArduino senge TP4056 izvo zvakanangana nekuchaja mabhatiri. Zvino, mune ino chinyorwa chitsva iwe uchadzidza zvakawanda nezve iyo LiPo mabhatiri. Ndokunge, imwe mhando ye lithiamu bhatiri iri kuwana mukurumbira wakawanda mumusika pamwe neLi-Ion.
Ini ndinokurudzirawo kuti utarise chinyorwa nezvake IMAX B6 bhatiri ndiro, mariri ndakanyora chikamu pamusoro mhando dzemabhatiri, maseru uye zvinounganidza yesimba remagetsi, iine musiyano wayo wakakosha, zvakanakira nekuipira. Izvo zvinogona kukubatsira iwe kuti unzwisise izvo zviri kuzokurukurwa pano nezve LiPo mabhatiri.
1 Nhanganyaya kuLithium
2 Lithium mabhatiri
2.1 LiPo vs Li-Ion mabhatiri
2.2 Matipi ekuchengetedza lithiamu mabhatiri
3 Tenga LiPo mabhatiri emapurojekiti ako
El lithium (Li) Icho chinhu chetafura ye periodic inoenderana nechena-chena alkali simbi. Inopisa zvikuru, ductile uye yakajeka (kupfuura aluminium). Iyo inokanganisa nekukurumidza kana ichinge yasangana neoksijeni mumhepo, uye haipo mune yakasununguka mamiriro mune zvakasikwa. Neichi chikonzero, iyo inofanirwa kugadziriswa mushure mesarudzo mumigodhi.
Haisi isimbi isingawanzoKubva makumi matanhatu neshanu pamazana ezviuru emamiriyoni epasi pevhu ndiyo lithiamu. Asi nhasi chave chakakosha kwazvo, sezvazvakaita necoltan mineral, nekuda kwekushandisa kwayo muindasitiri yehunyanzvi, kunyanya kugadzira mabhatiri nayo.
El lithiamu zvakare haigone kunyudzwa mumvura, sezvo ikasanganiswa nayo inogona kuita uye kupisa, sezvinoitika naNa. Naizvozvo, kana ikasangana neganda, inogona kukonzera kukuvara, nekuti ziya kana unyoro kubva paganda zvinogona kuburitsa ichi kupisa. Zvese zvikonzero zvevatengesi vebhatiri kuona kuti vakachengetedzwa zvakanaka kudzivirira njodzi dzinogona kuitika.
Sezvandamboreva, kumwe kwekushandisa kukuru kwe lithiamu kuri mabhatiri. Ose maviri emota zhinji dzemagetsi senge F1 mota, pamwe neiyo chikamu chemagetsi (nhare mbozha, mapiritsi, malaptop, ...). Ichokwadi kuti yanga isati yamboshandiswa, sezvo anga ari mamwe marudzi emabhatiri akaiswa mumusika.
Asi pakuziva zvivakwa zve lithiamu, senge kubhadharisa kwayo nekukurumidza, matambudziko asina basa ekutyisa ndangariro uye hupenyu, simba rayo (mashoma uye mabhatiri ane simba), nezvimwewo.
Mukati ma lithiamu mabhatiri aripo mhuri dzakasiyana izvo zvinomira kubva kune vamwe vese, kunyangwe nguva pfupi yadarika ivo vari kuyedza nezvimwe zvinowedzeredza zvinhu. Aya marudzi ndeaya:
Cobalt lithiamu oxide- Ivo vane yakakwira simba density uye vakasimba kwazvo, asi vanogona kuratidza kuchengetedzeka kunetsekana.
Lithium-magnesium oxide: Ivo vakachengeteka kwazvo, asi mashandiro avo uye kugona kwavo hazvisi zvakanaka nguva dzose, kunyanya patembiricha yakakwira.
Lithium iron phosphate: ndeimwe yeakanakisa maererano nekuchengetedza uye kugadzikana kwenguva refu, ichitsigira anopfuura 2000 mutero-kuburitsa kutenderera.
Li-ion: iwo anogona rechargeable lithium mabhatiri uye ane cylindrical kana tubular mapurani. Ivo vane huwandu hwakanaka, kusimba uye kuchengetedzeka.
lipo: LiPo mabhatiri ndiwo anotinakidza pachinyorwa chino, uye akapfava. Ivo zvakare vanokwanisa kudzoreredza uye vane hunhu hwakafanana neLi-Ion.
Iwo awakanzwa zvakanyanya, nekuti iwo akanakisa, ndiLi-Ion uye LiPo. Izvo zvine zvimwe misiyano inozivikanwa...
LiPo vs Li-Ion mabhatiri
Sezvandataura, mabhatiri LiPo uye Li-Ions zvakafanana munzira dzakawanda. Kwete ivo chete vanoshandisa lithiamu sechinhu chepasi, zvakare vane hupenyu hwakareba hwakareba. Zvirinani kuti vanopedza vangangoita chiuru kubhadharisa uye kuburitsa macircule, kunyangwe achiwanzo kuita mazana mashanu macircuit pasina kuita shanduko inooneka mukuita kwavo.
Kune rimwe divi, vese vane kuomarara kwakanaka, saka ane simba uye akakwirira-anokwanisa mabhatiri anogona kugadzirwa nehuremu hwakadzikira uye saizi. Ndokusaka vakaiswa pamafoni nhare.
Uye pakupedzisira, vese vanogovana zvakashata. Uye ndiko kuchengetedzeka kwavo, sezvo vakadaro njodzi yekupisa sezvakaonekwa mune zvisina kugadzirwa nhare. Kuti vadzivise matambudziko, ivo havafanirwe kuratidzwa kune kwakanyanya tembiricha futi.
Kana zvakadaro mutsauko uripo pakati peLiPo naLi-Ion:
Li-ion: ivo vanoshandisa lithiamu munyu electrolyte iri mune yakasanganiswa solvent (mvura), inozove iyo inopa iwo anodikanwa maion kutenderera aripo pakati pekathodhi uye anode panguva yekubuda. Aya ndiwo marongero anogona kuita musiyano wekuita kuti zvishandiso zvakabatana zvishande. Nenzira, maererano nemutero, maitiro acho anodzoserwa uye maion anotama kubva kune anode kuenda kune cathode.
lipo- Iyo lithiamu munyu inowanikwa mune gel (kazhinji polymer), iyo inoderedza mukana wekuputika. Ivo vanowanzo kuve vangangochinjika, saka ivo vanofarira mamodheru ayo akaremara. Dambudziko nderekuti dzinogona kupisa kupfuura Li-Ion.
A Chikamu chevashandisi, iwe haungawane chero mutsauko. Uchaona zvakafanana mashandiro, kugona, uye hunhu hunhu.
Matipi ekuchengetedza lithiamu mabhatiri
LiPo mabhatiri, senge Li-Ion mabhatiri, anogara kwenguva yakareba sezvandambotaura, asi izvo hazvireve kuti haufanire kuvatarisira. Kuita kuti vagare kwenguva refu, unogona kutevera izvi matipi akareruka:
Gara uchichaja bhatiri paunenge uchirida. Inofanirwa kubviswa pachigadzirwa chine iyo kana zvichibvira kana kumbodzima mudziyo uri kuishandisa.
Kuburitsa bhatiri kune muganho haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo mune idzi kesi.
Haufanire kumirira kusvikira yave 100% kuti ubvise chaja uye woishandisa kana uchiida. Iyo yekurangarira mhedzisiro pano ishoma.
Usaise bhatiri kumatembiricha akakwirira, nekuti izvi zvinovashatisa zvakanyanya.
Iwe haufanire kushandisa majaja ekuchaja nekukurumidza. Iyi tekinoroji inokurumidza uye inoshanda, asi nekuvaisa pasi pekushushikana kwakanyanya nekuda kwesimba remutoro, hupenyu hwavo hunobatsira hwaderedzwa.
Kana iwe uchizochengeta bhatiri kwenguva yakareba pasina kushandisa (mwedzi yakati wandei), saka unofanirwa kuve nechokwadi chekuti inobhadharwa kanokwana 40% kana kudarika.
Zvinogoneka kuti nekushaikwa kwekushandisa firimu ye Lithium chloride inoonekwa padanda rakanaka rebhatiri. Kunyangwe izvi zvichitadzisa kutenderera kwemaerekitironi, hazvina kunyanya kukuvadza, zvinobviswa nekushandisa.
Tenga LiPo mabhatiri emapurojekiti ako
Kana iwe uri kufunga nezve kutora LiPo bhatiri kuti ishandise mapurojekiti ako, iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kuawana mune akasiyana mafomati uye akasiyana akasiyana hunyanzvi hunhu. Pamusoro peiyo voltage uye kusimba kwainogona kupa, iyo inonyanya kukosha data kugona kwayo.
La huwandu hwemabhatiri aya hunoyerwa mAhndiko kuti, huwandu hweMA paawa yavanogona kupa. Semuenzaniso, bhatiri 1000 mAh rinogona kupa 1000mA kweawa rimwe chete. Asi zvinogona zvakare, semuenzaniso, kugovera 2A kwehafu yeawa, kana kumhanya kwemaawa mana uchipa 4A. Nguva yacho inoenderana nemitemo iyi ...
Iwe unofanirwa kuongorora izvo zvinoda simba zvemapurojekiti ako uye nekudaro uone chinzvimbo chaunoda. Heano mimwe mienzaniso ye zvigadzirwa zvaunogona kutenga paAmazon:
1550mAh 14.8V LiPo bhatiri
2200mAh 11.1V LiPo bhatiri
5000mAh 14,8V bhatiri
8000mAh 7.4V bhatiri
Yeuka kuti voltage haisi iyo inonyanya kukosha, sezvo iwe uchikwanisa kushandisa vatongi kuti vakwanise kuchinjisa kune izvo zvaunoda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » LiPo mabhatiri: zvakavanzika zveaya lithiamu mabhatiri
Arduino Leonardo: zvese zvaunoda kuti uzive nezve iro bhodhi rekuvandudza
WS2812B: iyo yemashiripiti RGB LED tambo